अब खोपसँगै बालबालिकाको नियमित आँखा परीक्षण पनि हुने - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ अब खोपसँगै बालबालिकाको नियमित आँखा परीक्षण पनि हुने
अब खोपसँगै बालबालिकाको नियमित आँखा परीक्षण पनि हुने
हेल्थ आवाज शनिबार, २०७८ असोज २३ गते, १४:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं—खोप लगाउने उमेरका बालबालिकाको आँखा परीक्षणका लागि बालबालिका कार्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तय हुने भएको छ । खोप केन्द्रमा खोप लगाउन जाने बालबालिकाको खोपसँगै आँखा पनि नियमित परीक्षण गर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो ।
ग्लोबल आई हेल्थ, इटहरी उपमहानगरपालिका र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको संयुक्त पहलमा सो पाठ्यक्रम तयार गर्न लागिएको कार्यक्रममा परिकल्पनाकार डा. बेन लिम्बुले जानकारी दिए । राजधानीमा एक कार्यक्रममाझ सो पाठ्यक्रमको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको डा. लिम्बुले बताए ।
पाठ्यक्रम तयार भएपछि नमुनाका रुपमा इटहरी महानगरपालिकाका खोप केन्द्रहरुबाट बालबालिकाको आँखा प्रारम्भिक परीक्षण गरिनेछ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नै तालिम दिएर समुदायमा रहेका बालबालिकाहरुको आँखा प्रारम्भिक परीक्षण गराउने गरी पाठ्यक्रममा राखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले स्क्रीनिङ गरेपछि सम्भावित आँखाको जाँच गराउनुपर्नेमा भएमा अभिभावकलाई विशेषज्ञ चिकित्सक कहाँ पठाउन सल्लाह दिनेछन् ।
इटहरीमा उपमहानरपालिकाबाट सुरु गरिने यो कार्यक्रम दुई वर्षभित्र प्रदेश १ का सबै जिल्लामा गर्दै देशभरि सञ्चालन गरिने डा. लिम्बुले जानकारी दिए । पाठ्यक्रम तयार भएर प्रारम्भिक रिपोर्ट आएपछि कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने योजना रहेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले बालबालिका स्कुल भर्ना हुनुअघि अनिवार्य आँखा जाँच गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा मोतिविन्दु, जलविन्दु, रेटिनोपेथी अफ प्रिमेच्युरेटी र कुपोषणले गर्दा आँखामा हुने समस्या धेरै छन् । त्यसैगरी दृष्टिदोष र अल्छी आँखा न्युन दृष्टिको मुख्य कारक रहेको छ ।
त्यसैगरी, अप्थोमोलोजी सोसाइटीका अध्यक्ष डा. रोहित सैजुले बच्चाको उमेरसँगै उसको आँखा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप गर्न नसकेमा पछि गएर न्यून दृष्टि वा दृष्टिबिहीन हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।